15-qof ayaa ku dhimatay tiro kalena waa ay ku dhaawacmeen weererkii Jamaacadda Garissa – Radio Muqdisho
15-qof ayaa ku dhimatay tiro kalena waa ay ku dhaawacmeen weererkii Jamaacadda Garissa
Ugu yeraan 17 qof ayaa ku geeriyootay 60 kalena waa ay ku dhaawacmeen weererkii maanta oo Khamiis ah ay kooxo wajiga soo duubtay ay ku galeen xarunta Jaamacadda Garissa, iyadoo sidoo kale qaar kamid ah ardayda ay ku xanibad yihiin gudaha waxaana tacshiirad saacado qaadatay ay dhex martay ciidanka Amniga iyo kuwa weerarka soo qaaday.
Inta badan dadka dhaawacmay ayaa ah kuwo rsaastu ay halka Afar kamid ah uu dhaawacoodu yahay mid liita sida laga soo xirtay wakaalada wararka ee Reuter.
Hay’adda Bisha Cas ee dalka Kenya ayaa dhankeeda soo warisay in ugu yeraan 60 ruux oo ay ku jiraan labo Boliis ah waxyeelo ka soo gaartay weererka iyadoo loola cararay Isbitaalada.
Sarkaal ka tirsan Boliiska dalka Kenya oo lagu magacaabo Joseph Boinnet ayaa sheegay in is rasaaseyn ay dhex martay dableydii weererka soo qaaday iyo ciidanka ilaalada xarunta.
” kuwo weererka soo qaaday ayaa si aan kala sooc laheyn u toogtay dhamaan dadkii ku sugnaa gudaha dhismaha Jaamacadda” ayaa yiri sakaalka Boliiska ah.
Wararkii ugu dambeeyay ayaa sheegaya in ciidanka ay gudaha u galeen dhismaha Jaamacadda Garissa.
Kooxda gumaadka ummada Soomaaliyeed ee UGUS ayaa sheegatay weerarka lagu qaaday jaamacada magaalada Garissa.
Sahra Samatar: "Dowladda Federaalka Waxaa ka go'an in Qaxootiga Yemen Jooga wax loo qabto."Wasiirka